SIDA LOO QALAJIYO GOGOLKA GURIGA DHEXDIISA FOORNADA (KORONTADA): HABKA QALLALAN EE BERRY GURIGA DHEXDIISA IYO INTEE AYAY QAADAN DOONTAA? - WIXII MARTIDA
Iyadoo height of xagaaga, hawo, geed, bilaabmaa ubax firfircoon, ku dhowaad dhammaan qaybaha kaas oo loo isticmaalo ma aha oo kaliya in cunto, laakiin sidoo kale loogu talagalay daawooyinka. Ubaxyada la qalajiyey, caleemaha iyo berry dhoobo shaaha, loo isticmaalo diyaarinta of compotes iyo decoctions. Inta badan waxaa loo isticmaalaa ujeedooyinka quruxda badan, tusaale ahaan, sida maqaarka maqaarka.
Hawthorn waxaa la ogyahay in ay saameyn ku leedahay caafimaadka guud, gobolka nidaamka wareegga dhiigga, socodka dhiigga iyo derbiyada daciifka ah, waxay yaraynaysaa cadaadiska, xasilinta nerves, iwm Si loo badbaadiyo haweeneyda xilliga qaboobaha sida kaydka fitamiinada, waa lagama maarmaan in la sameeyo diyaarin karti leh.
Si aad tan u sameyso, waxaad u baahan tahay inaad ogaato marka ay wanaagsan tahay inaad bilowdo soo qaadashada, qaybo ka mid ah dhirta ay yihiin kuwo waxtarka leh iyo kuwa waxyeelleynaya, hadday shaqeyntu tahay lagama maarmaanka u ah berry, intee in le'eg iyo xaaladahee ay tahay in la qalajiyo ubaxa. Natiijooyinkan iyo faahfaahintaan waxay kuu oggolaanayaan in aad kaydsato geedo qaali ah muddo dheer oo aad naftaada siisid qalab fiican oo daaweyn ah muddo ka badan hal sano. Hoos waxaa ku xusan in si faahfaahsan loo tixgeliyo sida loo qalajiyo gogolka guriga marka foornada, sida loo sameeyo si sax ah iyo waxa aad u baahan tahay inaad ogaato.
Miyuu suurtogal ah in la qalajiyo haweeneyda foornada?
Marka laga soo tago hababka dhaqanka ee qalajinta beeraha, waxay la qalajin karaa qalabka guryaha ee aad ka heli karto guriga, tusaale ahaan ka qaybqaadashada foornada. Waa suuragal in la helo koronto, waqti-tijaabeed iyo foorno khibrad leh leh awood koronto oo jikada ah.
Marka lagu jiro qalajinta, waxaad hubaal ka dhigi doontaa in dhammaan beeraha hawadu ay luminayaan qoyaan, isla markaana waxaad isticmaali doontaa qadarka ugu yar ee korantada. Wixii qalajin, ku habboon ubax, caleenta, iyo miro dhaf ah.
Ma jiro faraqa udhexeeya u dhexeeya duurka ama duurjoogta. Haweenta xayawaanku waxay soo saartaa miraha yaryar iyo kuwa yar yar, laakiin qaabka la qalajiyey waxay keeni doonaan faa'iido ka yar noocyada beerta beerta.
Haatan waxan eegnaa geeddi-socodka qalajinta foornada.
First of dhan si taxadar leh u baaro warshadda ururinta. Hubi in qayb ka mid ah geedaha, oo ay ku jiraan afkoda, ayaa saameeyey cayayaanka, caaryada ama cudurada. Iyada oo dareenka ugu yar ee joogitaanka dirxiga, cawl ama huuri "rusty", madow on caleemaha iyo dhaawacyo kale, waxaa ka wanaagsan inaad ka tagto ururinta ee this baadiyaha haweenka ah.
Ka bilow daawashada baadiyaha laga bilaabo May, waqtigeeda si ay u ururiyaan ubaxyo bisil, halka burooyinkeeda caleemaha ah ay weli sii kordhayaan. Waxaa lagama maarmaan ah in la qaado ururinta kuleylaha qallalan. Xilliga roobka, subaxda ama fiidka ma aha mid ku haboon - tan qoyaan badan, taas oo ah ubaxyada qalajin doona muddo dheer. Meelaha inflorescences (corymbose iyo kooxo kala duwan oo burooyinkooda ah) si tartiib ah ugu gooyo mindi ama jarjar, isla markaana ka soo celi caleemaha sanduuq khafiif ah ama weel kasta oo qallalan.
Marka xigta, ubaxyada la soo ururiyey ayaa la dhigaa tuwaal warqad ama xoqin ah oo lagu qalajiyo meel qallalan oo qoyan (inta badan waxay isticmaalaan qiiqa). Hal lakabka ah, ubaxyada ayaa la qalajiyey wax ka badan hal maalin. Ha ilaawin inaad ku daboolato lakabka dharka cad oo faashad leh. Waxay ka ilaalin doontaa haweeneyda cayayaanka, sida duuduubka miraha ama aboorada cuntada, kana ilaali boodhka degitaanka.
Marka la eego ururinta midhaha miraha, muddada bislaanshaha ee ku habboon waa laga bilaabo badhtamaha Agoosto ilaa dhammaadka dayrta. Si aad u qallajiso soo qaado bislaado, miro cufan, oo aan ku dhicin wixii cillado ah. Miraha tayada sare leh waxay leeyihiin xitaa, hodan qani ah oo huruud ah, orange ama casaan ah oo u eg dhiigga arterial.
Dabiici ahaan miro dhererka ku haboon ee cabbirka kasta, laakiin kuwa yaryar waxay ka fiican yihiin inay si gooni ah ugu qalajiyaan kuwa waaweyn - waxaad u maamuli doontaa kan ugu horreeya si dhakhso ah. Berry wuxuu u baahan yahay in si fiican loo maydho colander hoos biyo, biyo qoyan ama shukumaan, oo ka baxo wakhti si aad u qalajiso, sida kiiska ubaxyada. Qalajinta hore waxay qaadan doontaa maalmo ilaa dhowr maalmood.
Isticmaal mindi si aad u nadiifiso ka hor inta aan lagu qalajin karin foornada oo dhan oo ka mid ah berry ka soo shaashada iyo hababka kale ee miro. Lafaha uma baahna in laga saaro - shaaha, kariska iyo cuntooyinka kale, ma noqon doonto mid aad u macquul ah.
Foornada korantada ah (foornada korontada) waa ikhtiyaarka ugu fiican, laakiin haddii aad leedahay foornada gaaska, dhammaan kuwa weli ku jira waa in yar si yar loo yareeyo heerkulka, si buuxda u kululeeyo foornada, kadibna kaddib dhoobada hawada ku jirta. Waxaad ku jajabin kartaa berry on sheet dubista ama tufaax alwaax ah.
Waqti intee la'eg oo qalalan?
Waxaa suurtagal ah in badan oo idinka mid ah la yaabay: "Sidee loo qalajiyaa haweeneyda foornada, intee in le'eg?", Jawaabta waa wax fudud - waa in lagu hagaajiyaa lambarka iyo xajmiga qaybaha haweenka, qaybo ka mid ah waxa aad qalalan - berry ama tufaax. Waxay qaadan kartaa dhowr saacadood si ay u qallajiso miraha waaweyn, iyo badh keliya oo ubaxyada iyo caleemaha.
Waa maxay nooca?
Waxaa wanaagsan in la doorto heer dhexdhexaad ah ama heerkul hooseeya. Hawthorn aad u nugul heerkulka sare oo si fudud ayuu u shiili karaa, isagoo noqonaya wax aan faa'iido lahayn. Haddii ay jirto qaab hawo-qaadasho ah, way fiicnaan doontaa inaad u soo jeediso. Haddii kale, hubso in aad ka baxdo albaabka foornada waxoogaa yar - qoyaan badan ayaa si xor ah u bixi kara dibadda iyaga oo aan ku uruurin berry.
Waa maxay heerkulka
Laga soo bilaabo heerkulka ugu hooseeya dooro qiyaastii 50-70 ° Coo ku saleysan awooda qalabka guryaha. Waa la oggol yahay in waxoogaa kor u kaco heerkulka haddii foornadaadu aysan aad u awoodin. Heerkulka 40 ° C ayaa ku filan qalajinta qaybaha kale ee dhirta.
Iyadoo lagu qalajinayo berry, waxaa lagama maarmaan ah in ay si joogto ah isugu qasaan oo ay u hubiyaan inaanay la gubin ama wada joogin. Sidaa darteed, xaashida dubista waxaad u baahan tahay inaad soo saaro midhaha masaafada u dhexaysa midba midka kale, hal lakab.
Go'aaminta diyaargarowga waa suurtagal in labadaba muuqaal ahaan iyo adkaanta saxarada. Dibedda, haweenku waa la duubi doonaa, loona yareeyaa qiyaastii 2-3 jeer, badanaa madow.
Calaamadee caleenta taabashada, qaado cawl yar oo calaacal ah isla markaana si tartiib ah u tuujin. Haddii aad dareensan tahay in haweentu ay isku wada dhafan tahay, oo ku maydhayso casiirka, ama aan la duuduubin, markaa waxay macno u tahay in ay ka baxdo foornada saacad ama wax ka badan.
Waxyaabaha si fiican loo qalajiyey waxay noqon doontaa mid qalalan oo dabacsan.. Alaabta la dhamaystiray waa la qalajiyey mar labaadna waxaa lagu hubiyey joogitaanka bacalka, peduncles iyo qashinka kale ee yaryar.
Dukaanka dukaanka ah waa inuu ku jiraa bacaha iyo baakadaha.laga ilaaliyo cayayaanka, hawada diiran ee qoyan, urta dheeraadka ah iyo boodhka qolka. Mid dhexdhexaad ah, hawo qallalan ayaa qiyaastii laba ilaa shan sano oo aan la haynin.
Sida lororijiyada iyo caleemaha la qalajiyey, haweenta noocan oo kale ah waxaa lagu keydin karaa sanduuqyada kartoonada ah ee lagu xardhay warqad ama warqad kale, ama bac marsan. Qolka aad dhigtay sahaydaadu waa inay ahaato mugdi, qabow, oo leh wareegga wanaagsan ee hawada cusub.
Qalabka Cabbitaanka uma baahna diyaar garow halis ah, aad uga dhaqsaha badan yahay qallajinta dabiiciga ah ee qiiqa ama balakoonka, oo kuu ogolaanaya inaad badbaadiso badi nafaqada.
Ka hor inta aanad engegin, miraha waxaa laga nadiifiyey caws iyo dabo kale, si aad u dhaqday si aad adiga iyo qoyskaaga uga ilaalisid microbes iyo bakteeriyada waxyeelada leh. Looma baahna inaad ka tagto hawo cusub muddo dheer - nadiifi oo isla markiiba qalaji.
Fiiri xarriiqda heerkulka, ha u ogolaan in ubaxu gubo oo ha uga soo bixin foornada kahor. Tani waxay kordhisaa khatarta ah inay ku dhacdo cuduro ama caaryo. Sidoo kale jawaabta su'aasha ah waxa iyo meesha lagu keydiyo kaydka soo baxay. Hada, adoo garanaya sida loo qalajiyo haweeneyada guriga foornada, waxaad si ammaan ah u badbaadin kartaa mucjiso of berry ah isticmaalka dheer.